Myanmar International Fashion Week 2019 အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောလာတဲ့ စိန်လင်း ( Aroma ) – Myanmar Chat Online
Myanmar International Fashion Week 2019 အတွက် ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောလာတဲ့ စိန်လင်း ( Aroma )
စိန်လင်း ( Aroma )လို့ လူသိများလာတာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်းကပါ။ လူတော်တော်များများက၊ ပုရိတ်သတ်တော်တော်များများက သူ့ကို အဆိုတော်ဆိုပြီး သိထားကျပါတယ်။ သူက အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သလို ကိုယ်တိုင် ဆိုထားတဲ့ MTV တွေမှာ သရုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုပါ ပိုင်နိုင်စွာနဲ့ ပီပီပြင်ပြင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို Uncel ကတော့ No ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ လူသိပိုများလာခဲ့တာပါ။
အခု ဆိုရင်လည်း သူက Myanmar International Fashion Week 2019 အတွက် အကောင်းဆုံးသော သီချင်းတွေနဲ့ တင်ဆက်ဖျော်ဖြေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုရိတ်သတ်တွေအားလုံးလည်း သူ့သီချင်းနဲ့ မြှူးနေကျတာကို သူတင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်မှာတွေရမှာပါ။
ဒီမှာလည်း ( ၇ ) နှစ်တိုင်တိုင် အောင်မြင်စွာနဲ့ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆရာဂျွနန်လွင် ရဲ့ အံ့မခန်းစီစဉ်ဆောင်ရါက်မှုများနနဲ့ ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့ Myanmar International Fashion Week 2019 အတွက်ဂုဏ်ယူပါတ်ခင်ျော ဆိုပြီးရေးပေးထားပါသေးတယ်။
ကဲ ပရိတ်သတ်ကြီးတို့ရော ကိုစိန်လင်း ( Aroma ) ကို ချစ်ကျရဲ့လားဗျ ?
Apple ကနေ ၆လစာ အခမဲ့ Apple Music ကို ရယူကျမယ်
အမေရိကန်တွေ သူတို့ကလေးကို ဘယ်လိုထိန်းပြီး ပြုစုပျိုးထောင်လည်း ?
သားရဲ့ မိခင် အတွက် လိုအပ်မှ သတင်းဌာန များ ကို တွေဆုံ မည့် ဇင်ယော်မောင်မောင်
“သရုပ်ဆောင်မေသန်းနုကို အလုပ်နှင့် ထောင်တစ်နှစ်ချ”
ချစ်စနိုးဦး အမျိုးသားအိမ်က ကားတွေတဲ့
မေးခွန်းများစွာဖြင့် ဆရာဝန် သားအဖ ရဲ့ သေဆုံးမူ
ထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေသည့် မော်လမြိုင်က ဆရာဝန်သားအဖ စီးသွားသည့်ကားကို မြစ်ထဲက ဆယ်ယူ
Myanmar Chat Online. All Rights Reserved